हामी संघीयतालाई जनस्तरमा पुराउँदै छौँ: उपाध्यक्ष बुद्ध बस्नेत, ऐरावती गाउँपालिका
देश संघीयतामा गए पनि संघीय र प्रदेश सरकारहरूले संभव भएसम्म अधिकार र स्रोतसाधनहरूको केन्द्रीकरणमा जोडबल गरिरहेको समयमा प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिकाले भने टोल-टोलमा बजेटसहित टोल विकास संस्था गठन गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा हामीले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बुद्ध बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छौँ - सम्पादक ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइन २०७७ भदौ १ गते सोमवार
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनः ऐरावती गाउँपालिकाले टोल विकास संस्था गठन गर्ने नयाँ अवधारणा ल्याएको सुनियो । खासमा यो के हो ?
उपाध्यक्ष बस्नेतः हामीले अहिले ऐरावती गाउँपालिकामा टोल विकास संस्था गठन गर्ने अवधारणा ल्याएका छौँ । यतिबेला प्यूठानको सन्दर्भमा टोल विकास संस्था नयाँ प्रयोगको रुपमा रहेको छ । यद्यपि अनेत्र जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले टोल विकास संस्था गठन गरी प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । कामकाजको हिसाबले यो संस्था सफल र निकै प्रभावकारी रुपमा देखा परेको छ । यहाँ हामीले पनि विगतका वर्षहरुदेखि यसको आवश्यकता महशुस गरेका थियौँ तर बुझाइमा अनेकता र आवश्यक तयारी नपुगेका कारण यो कार्यक्रम लागु गर्न सकिएको थिएन । यसपालिको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेत आवश्यक व्यवस्था गरेर निकै उत्साहकासाथ द्रुत गतिमा टोल विकास संस्था गठनमा लागेका छौँ ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनः जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा टोल विकास संस्था गठन भएको पाइएको छैन । ऐरावती गाउँपालिकामा गठन गर्नुको उद्देश्य के हो ?
उपाध्यक्ष बस्नेतः मैले अघि नै भनिसकेँ प्यूठानमा यो पहिलो अभ्यास हो । मुख्य गरी संघीय संरचना लागु भइसकेपछि विगतको गा.वि.स. अहिले वडाका रुपमा सीमित भएका छन् तर भूगोल भने उही पुरानो गाउँ विकास समिति नै हो । हिजोका दिनमा ४५ जना जनप्रतिनिधि रहेर काम गर्ने ठाउँमा अहिले ५ जना जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपरेको छ तर भूगोल उही नै हो । यसले गर्दा कहीँ न कहीँ हाम्रा विकास निर्माणका लक्ष्यहरु पूरा भएका छैनन् । साथै वस्ती स्तरबाट आउने समस्याहरु कहीँ न कहीँ कतै अपूरा र अधुरा हुन पुगेका छन् । अब यो टोल विकास संस्थाले पूर्णता पाएपछि हाम्रा सबै भूगोल र वस्तीमा समेटिनेछन् । र, हाम्रा प्रतिनिधि साथीहरुलाई काममा सहजता पनि हुनेछ । यो संघीयतालाई जनस्तरमा पुराउने हाम्रो नयाँ अभियान हो । तपाईं यसलाई हाम्रो टोल-टोलमा सिंहदरबार पुराउने अभियान भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनः टोल विकास संस्था गठनका लागि गाउँपालिकाको कार्यक्रम मात्र हो कि अरु कुनै संघ-संस्था पनि छन् ?
उपाध्यक्ष बस्नेतः मुख्य गरी टोल विकास संस्था गठन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएको ऐरावती गाउँपालिकाले नै हो र यसको साथसाथै यस पालिकामा विगत वर्षदेखि स्ट्रोमा फाउण्डेसन र कालिका विकास केन्द्र संस्था जोडिएर काम गरिरहेको हुँदा यस टोल विकास संस्था गठन गर्ने सन्दर्भमा कालिका विकास केन्द्र पनि जोडिएको छ ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनः टोल विकास संस्था कति सदस्य बनेको छ ?
उपाध्यक्ष बस्नेतः ऐरावती गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा एकैनासको छैन । तसर्थ टोल विकास संस्था गठन गर्दा त्यहाँको भूगोल र घरधुरी संस्थालाई आधार मानेर ६०–१०० घरधुरी समेटेर टोल विकास संस्था गठन गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ । विकास निर्माणमा महिला सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई अघि बढाउन यसको कार्यसमितिमा ५० प्रतिशत महिला रहने गरी ९ जनाको कार्यसमिति रहनेछ ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनः टोल विकास संस्था कति गतेदेखि सुरुवात गरियो ?
उपाध्यक्ष बस्नेतः हामीले यो संस्था गठन गर्नुपूर्व गत श्रावण १५ गते सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कालिका विकास केन्द्रका प्रतिनिधि तथा ऐरावती गाउँपालिकाका कर्मचारी समेतको उपस्थितिमा एउटा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यौँ र आवश्यक नीति निर्देशन सहित श्रावण १६ गतेदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी परिचालन गरी टोल विकास संस्था गठनमा लागेका छौँ ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनः ऐरावली गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा गरी कति टोल विकास संस्था गठन गरिन्छ ? यसका आधारहरु के के हुन् ?
उपाध्यक्ष बस्नेतः हामीले टोल विकास संस्था गठनका लागि केही निश्चित आधारहरु छन् । जस्तैः १. पुरानो साविकको वडा संरचनाको आधार, २. घरधुरी संख्या, ३. प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन रहेको आधार, ४. एउटै बाटो, पँधेरो, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति रहेको आधार, ५. एउटै समूहमा आबद्ध रहेको आमा समूह, कृषक समूह, महिला समूह र सहकारी संस्था आदिको आधार । यसो गर्दा गाउँभरिमा करिब ६० वटा टोल विकास संस्था गठन हुनेछन् र यो कार्य यही साउन २५ गते भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेता पनि विविध कारणवश केही ठाउँमा बाँकी रहेका छन् ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनः कसको उपस्थितिमा गठन गरिएको छ ? गठन प्रक्रिया के हो ?
उपाध्यक्ष बस्नेतः टोल विकास संस्था गठनका लागि हामीले सम्बन्धित वडा समितिलाई जिम्मा दिएका छौँ । उहाँहरुले आफैले कर्यसूची बनाएर कालिका विकास केन्द्रका सामाजिक परिचालकसमेतको सहीकरणमा गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनः गठन पश्चात समितिबाट के कस्ता कार्य हुन्छन् र यसलाई गाउँपालिकाले कसरी परिचालन गर्छ ?
उपाध्यक्ष बस्नेतः सदस्यहरुलाई विकासको मूल प्रवाहमा संलग्न हुने अवसर प्रदान गरिने छ । विभिन्न संघ–संस्था एवम् गैरसरकारी संस्थाहरुलाई प्रवेशद्वारको रुपमा टोल विकास संस्थालाई स्थापित गरिने छ । यस संस्थालाई वडापालिकाको तल्लो इकाइको रुपमा विकास गरी गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने हरेक कार्यक्रममा जोडिने छ । यो लगायत अन्य धेरै कामहरु यस संस्था मार्फत हुने अपेक्षा लिएको छु ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनः यस कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ कि छैन ?
उपाध्यक्ष बस्नेतः टोल विकास संस्था गठन र परिचालनका लागि यसपटक हरेक वडाहरुमा रु. ५ लाखको दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो संस्थाको सुदृढीकरण र विकासका लागि गाउँपालिकामा समेत थप बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । यसका लागि कालिका विकास केन्द्रबाट तालिम र गोष्ठीहरुका लागि आवश्यक सहयोग हुनेछ ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनः यसबारे संस्थामा बस्ने स्थानीयहरु र आम जनताले कस्तो धारणा पाउनु भएको छ ?
उपाध्यक्ष बस्नेतः यो आफैमा नयाँ र नौलो अभ्यास भएकोले नागरिकहरुमा एउटा छुट्टै प्रकारको उद्वेलना, उत्साह र रमाइलो माहौल देखा परेको छ । यसले गर्दा सुरुमै हामी सफल रहेको महशुस गरिएको छ ।
लेफ्ट रिभ्यु अनलाइनः अन्त्यमा, थप केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ?
उपाध्यक्ष बस्नेतः टोल विकास संस्थाबारे त तपाईंका कैयन प्रश्नले धेरै उत्तरहरु आइसकेका छन् । तपाईंको यस लोकप्रिय अनलाइन मिडियामार्फत मेरा विचार र भावनाहरु प्रवाहरु गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईं लगायत मिडिया परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । सामाजिक समृद्धि र विकासका लागि यहाँहरु जस्तो मिडियाकर्मीहरुले आफ्नो ठाउँबाट लाग्नका र हामीजस्ता मोफसलमा बसेर जनताको सेवामा समर्पितहरुको आवाजलाई राष्ट्रिय प्रवाहमा पुराउन सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपील अपील गर्न चाहन्छु ।
पछिल्लाे - किम जोङ उनद्वारा किम तोक हुनलाई देशको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त
अघिल्लाे - मैले मेरो परिवारको बलिदानलाई यसरी बुझेँः शहीदपुत्रीको संस्मरण